In the Tall Grass 2019 | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
ကာလ်နဲ့ ဘက်ကီတို့ ဆန်ဒီရေးဂိုကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ ဘက်ကီက ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူ့ဘေးနားက ကားမောင်းနေတဲ့ ကာလ်က သူ့အကို ကားတောက် လျှောက်မောင်းလာရင်းနဲ့ တစ်နေရာ အရောက်မှာ စကားပြောရင်းနဲ့ ခဏနားဖြစ်ကြတယ်။ ရှင်းလင်းနေတဲ့လမ်းမကြီးအလယ်မှာကာလ်တို့ ကားလေးရယ် ဘေးတစ်ဖက်မှာ ဘုရားကျောင်းတစ်ရယ်ရှိတယ်။
ကျန်တဲ့ ဘေးတစ်ချက်မှာတော့ မျှော်မဆုံးအောင် ထူထပ်နေတဲ့မြက်ရိုင်းရှည်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမြက်ရိုင်း ရှည်တွေကြားကနေ ကလေးတစ်ယောက် အကူအညီတောင်းသံ ကြားလိုက်ရတယ်။ ‘ကျွန်တော့်ကိုကယ်ကြပါဦး… ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပျောက်နေလို့ပါ’ ဘက်ကီရယ် ကာလ်ရယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ အတူ မြက်ရိုင်းတောထဲက ကလေးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ မြက်ရိုင်းပင် ရှည်တွေကြားထဲကို တိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘက်ကီနဲ့ ကာလ်တို့ ကူညီဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့ ကလေးက တကယ်ပဲ အကူအညီလိုနေတာလား? ကူရောကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့လား? စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ဗျာ… ဒီဇာက်ကားက IT ရုပ်ရှင်ရဲ့ မူရင်းဝထ္ထုရေးသားသူ Stephen King ရဲ့လက်ရာတစ်ပုဒ်ကိုပဲ ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မထွက်လာခင်ကတည်းက လူတော်တော်များများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ အတူစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။